Agaasime Maxamed Ilkacase & Shan Digreeto Madaxweyne (2255 Maalmood) |
Agaasime Maxamed Ilkacase & Shan Digreeto Madaxweyne (2255 Maalmood)
Agaasimaha cusub ee Wasaaradda Beeraha, Maxamed Cilmi Aadan (Ilkacase), waxa Madaxweyne Axmed Siilaanyo ku magacaabay shan digreeto oo kala gedisan, toddobadii sannadood ee xukuumadda KULMIYE talada haysay.
Malahayga waxaa uu ka mid noqonayaa masuuliyiinta ugu beddelka badan oo dhawr isku-shaandhaymood oo madaxweynuhu soo saaray ay saameeyeen.
Saaxiibkay Maxamed Ilkacase, sannadkii 2010 oo madaxweyne Siilaanyo xilka qabtay, waxaa loo magacaabay Agaasimaha Baratakoolka Madaxtooyada, muddo aan badnayn kadib, wuxuu isku maray oo uu Agaasime guud ka noqday wasaaradaha Kalluumaysiga, Warfaafinta, Shaqada & Arrimaha bulshada, iyadoo digreetadii u dambaysay Arbacadii la soo dhaafay loogu beddelay inuu noqdo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Beeraha.
Waxaan aaminsan nahay in shantaas xil ee uu qaranka ugu soo adeegay (Laba Kun, Laba Boqol iyo Shan iyo Konton) maalmood (2255) oo u dhiganta 7 sannadood inuu shaqooyinkaas kala duwan uu waayo-aragnimo ka kasbaday oo aan wasaaradihii uu soo maray midna looga sheekaynayn waajibka ay qaranka u hayaan.
Waxaan ku xasuustay shantan xil ee uu soo maray Maxamed Ilkacase, dhambaal tacsi ah oo uu caawa u dirayey qoyskii uu ka baxay sarkaal ka tirsanaa Wasaaradda Kalluumaysiga oo maanta ku geeriyooday Hargeysa oo ALLE ha u naxariistee la odhan jiray Marxuum-Zaam Cumar Geeddi, oo uu agaasime ugu ahaa xilligii uu joogay wasaaradda Kalluumaysiga.
Ma caddeyn karo,laakiin dadka qaar ayaa aaminsan inuu wasaaradaha qaarkood ay is khilaafeen wasiirradii ay wada shaqeynayeen. Waxase aan qabaa inuu agaasimuhu yahay nin dabci wanaagsan oo dad la dhaqan leh, khibrad badanna taabay muddadii uu xayndaabka dawladda ka dhex shaqeynayey.
Ugu yaraan Waxaan is weydiiyay illaa imisa hawlwadeen ama sarkaal oo ka tirsan xafiisyadii uu ka soo shaqeeyay ayay is barteen toddobadaas sannadood? Taasina miyaanay faa’iido ahayn tusmaynaysa inuu yahay qof nasiib badan.